काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि २७ दिनदेखि अनशनरत प्राडा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ९ बुँदे सममति भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सहमति भएपछि डा. केसीको अनशन तोडेका छन् ।
डा. केसीको २७ दिन लामो अनसनपछि सरकार काठमाडौं उपत्यकामा दश वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति नदिन सहमत भएपछि वार्ताको वातावरण बनेको हो ।
सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको दफा १२ मा संशोधन गरेर ‘ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा मेडिकल,डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिने छ । तर, आशयपत्र लिइसकेका हकमा यो लागू हुने छैन् । आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पुरा गरेका शिक्षण संस्थाका लागि दुई विकल्प राखिएको छ । सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन । काठमाडौं खुल्न लागेको मनमोहन कलेज र झापामा स्थापना भएको बीएण्ड सी कलेजलाई लक्षित गरेर यो विकल्प राखिएको हो ।
विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गरेर एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरिनेछ । तर, यो अहिले सम्बन्धन पाइसकेकाहरुको हकमा लागू नहुने र काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि १० वर्षे प्रतिबन्ध थियो । तर, नयाँ सरकारले १० वर्षे प्रतिबन्धसँगै एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने लगायतका मुल व्यवस्थाहरूलाई हटायो ।
अध्यादेशको हुबहु विधेयक हुनु पर्ने भन्दै डा. केसी असार १६ गतेदेखि जुम्लामा गएर अनसन बसे । उनको स्वास्थ्य विग्रँदै गएपछि कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नुका साथै सडक आन्दोलन थाल्यो । १५ दिनपछि डा. केसीलाई बलपूर्वक काठमाडौं ल्याएपनि विधेयकमा सहमति नभएपछि सरकार दबावमा परेको थियो ।
सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएपनि विधेयकका विषयबस्तुमा कुरा मिल्न सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सक्रियतामा बुधबार वार्ता भएपनि निष्कर्षमा पुगेन् । बिहिबार अवेर सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने विषयमा सहमति जनाएपछि वार्ता सफल भएको हो । वार्तामा सरकारका तर्फबाट नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र माथेमा कार्यदलका संयोजक प्रा. केदारभक्त माथेमाले अस्पतालमा अनशनरत डा. केसीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा जुस ख्वाएर अनशन तोडाए ।
नौबुँदे सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ताटोलीका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान ताथ प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल र डा. केसीका तर्फबाट उनी स्वयंले हस्ताक्षर गरेका छन् । केसीका समर्थकहरुले सहमति कार्यान्वय हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
डा. केसीको अनशन तोडाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै नेकपाका नेता नेम्वाङ, डा. माथेमा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा, मन्त्रिपरिषद्का चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहलगायत सक्रिय थिए ।
प्रकाशित ११ साउन २0७५ , शुक्रबार | 2018-07-27 03:39:29